Wasiir Dubbe; ”Ma jiro Askari ka tirsan Ciidamada Soomaaliya oo ka dagaalamay Tigray” – Radio Daljir
Wasiir Dubbe; ”Ma jiro Askari ka tirsan Ciidamada Soomaaliya oo ka dagaalamay Tigray”
Juunyo 10, 2021 2:25 g 0
Wasiirka Warfaafinta Cismaan Dubbe ayaa shir jaraa’id oo uu goordhow qabtay ku xaqiijiyay in ciidamada tababarka ugu maqan dalka Eritrea, isagoo sheegay in la siyaasadeynayo Ciidamada tababarka ku maqan, waxaana uu waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya inay jiraan Ciidamo Soomaali ah oo ka dagaalamay Gobolka Tigray.
Wasiir Dubbe ayaa ku eedeeyeen musharaxiinta Madaxtinimada Soomaaliya inay ajande doorasho ka dhigtaan arrimaha tababarka ciidamada.
“Kama hadlaan siyaasiyiinta Xadgudubyada Kenya ay dalka ku hayso,carruurta dhimanayso oo ay duqeynta ku dileyso,balse waxay ajande ka dhigteen askar tababar ku maqan”ayuu sii raaciyay Wasiir Dubbe.
Kenya oo dib u furtay duulimaadyada dalkeeda iyo dalka Soomaaliya